अनुसन्धान कर्ताहरुको निष्कर्ष ! महिलाहरुको यौन उत्तेजनामा बढी यी दुइ अंग «
अनुसन्धान कर्ताहरुको निष्कर्ष ! महिलाहरुको यौन उत्तेजनामा बढी यी दुइ अंग
प्रकाशित मिति : ३ आश्विन २०७५, बुधबार ०७:५६
महिलाहरुमा यौन आनन्द प्राप्त स्तनको स्पर्शले हुन्छ । अर्थात् महिलाहरुको यौन उत्तेजनामा योनी जति संवेदनशील हुन्छ स्तनको टुप्पो पनि त्यस भन्दा कम हुँदैन ।
आफ्नो अनुसन्धानका क्रममा अनुसनधानकर्ताहरुले २३ देखि ५६ वर्ष सम्मका ११ जना महिलालाई उनीहरुको योनी र स्तनलाई सुम्सुम्याउन अह्राएका थिए ।
यसरी सिर्जना हुने उत्तेजनाका बेला उनीहरुको मस्तिष्कमा हुने परिवर्तनको अध्ययन गर्न मस्तिष्कलाई ब्रेन स्क्यानर भित्र राखिएको थियो । त्यसक्रममा प्राप्त तस्वीरहरुले योनी र स्तन दुबैबाट प्रवाह हुने उत्तेजना स्नायु हुँदै मस्तिष्कको क्लस्टर अफ ग्रेप्स भन्ने ठाउँमा गएको पाइयो ।
पुरुषमा पनि लिंगबाट प्रवाहित हुने उत्तेजना सोही भागले ग्रहण गर्ने गर्छ ।यसरि समाउद बढी भन्दा बढी आनन्द आउछ ।